China Usb-C hub-BX4H ifektri abakhiqizi | Iqembu leBrocade
MOQ: Izingcezu ezingama-50
Intengo ye-FOB: USD $ 7.49-8.49 ucezu ngalunye
Imbobo: I-Guangzhou / shenzhen
inkokhelo: Idiphozi engu-TT30%, ibhalansi engu-TT70% ngaphambi kokuthunyelwa
Amandla Wokunikezela: Izingcezu ezingama-6000 ngenyanga
Isikhathi sokuthumela: kukhona izinsuku zesampula, izinsuku ezingamashumi amathathu zokukhiqizwa.
Okufakiwe Yekuchumana: 1piece / ibhokisi elincane
I-4 ku-1 usb c hub aluminium alloy material, inqubo ye-anodic oxidation, insimbi engagqoki nokugqwala engasebenzi njenge-MacBook, ukuthinta okuntekenteke.
Ukunwetshwa Okukhulu: Ihabhu le-USB C eliya ku-HDMI elixhunywe nge-USB3.0, i-USB 2.0, i-4K @ 30 i-HDMI, kanye ne-100W / 20V / 5A yohlobo C PD lokushaja imbobo. Uzakwethu ofanelekayo wekhompuyutha ephathekayo, ikhompyutha, ithebhulethi nomakhalekhukhwini. Ihambisana ne-Windows XP / 7/8/10 / Vista / i-Chrome OS / i-Mac OS / i-Linux / i-Android njll.
Dlulisa idatha ngemizuzwana: Dlulisa futhi ulondoloze amafayela akho ngesivinini esifika ku-5Gbps nge-USB 3.0 port. Lokho kushesha ngokwanele ukudlulisa izithombe, amafayela, namavidiyo ngemizuzwana. I-USB C eya kwi-USB nayo ifakwe i-USB 2.0 port, ekulungele ukuthi uxhume igundane noma ikhibhodi.
Ividiyo ebonakalayo ye-4K UHD: Mirror noma nweba isikrini sakho se-HDMI port sohlobo C ihabhu le-USB bese usakaza ngqo i-4K Ultra HD @ 30Hz noma ividiyo ephelele ye-HD 1080P ku-HDTV, ukuqapha noma iprojektha. Iphinde ikulethele ukuvumelanisa okucacile kwevidiyo ye-3D.
Ilula Ukuyisebenzisa: Xhuma futhi udlale, awekho amadrayivu wangaphandle noma amandla adingekayo (Ngenxa yomkhawulo wokuphakelwa kwamandla wekhompuyutha ephathekayo, amanye amadivayisi anamandla amakhulu kungenzeka angaqali, njenge-disk yangaphandle ye-3.5mm, iphrinta, njll. Hhayi eyeSuperDrive )
Izinto Aluminium ingxubevange + ABS
I-HDMI 4K * 2K @ 30HZ ISINQUMO
Charing Amandla UKUSEKELA 5V-2A UKUSHAJA
Okuyinhloko UCWANINGO LWETHOPHINIKIWE
Ulayini 11.5 CM
Ubukhulu 80 * 29 * 12 mm
Ubukhulu (iphakethe) 172 * 98 * 24 mm
Isisindo 36 g
Isisindo (iphakethe) 67 g
Langaphambilini Usb-C ihabhu-CH08A